QUUDHSI - DIID
GABAYGII QUUDHSI DIID
Gabaygan waxaa tiriyey halyeyga caanka ka noqday Soomaaliya oo dhan ee ay Abwaanadu magaciisa kusoo daraan maansadooda marka ay ka sheekeynayaan dulmi diinimo iyo hanweynaan. Wuxuu kaloo Abwaanku caan ku yahay inkastoo aan maanta la sheegin oo si kale loo fasiro maahmaahda ay Soomaalidu wada taqaan ee ah: “Ayax teg Eelna reeb”. Abwaanku wuxuu ka tegey gabayo iyo suugaan badan oo aan maanta la hayn lana qariyey ama la min guuriyey. Waxaa inta badan la neceb yahay in la soo faago ama dibada la keeno Suugaantii Ayax dhowre iyadoo laga baqayo in ay soo baxaan ceebo fara badan. Ayax, Allaha u naxariistee, wuxuu ahaan jirey nin aan gaban oo aad u necbaa isku xadgudubka. Wuxuu ahaa nin aad u han weynaa oo ka dhashay qowmiyadaha laga tira badnaa ee ku noolaa Agagaarka Mudug. Wuxuu yaqaanay xuquuqdiisa, wuxuuna wax walba ka hormarin jirey inuu ilaasho sharftiisa iyo reerihiisa. Sababta uu gabaygan caan baxay u tiriyeyna waxay ahay Godob uu ka sheeganeyey Reer ay oodwadaag ahaayeen oo ku xad gudbay. Qisadiina waxay u dhacday sidan:
Ayax Mohamed Dhowre Dagaal oo ka dhashay qowmiyada Yibraha ayaa wuxuu la degi jirey oo ay isku quud iyo qaaraanba ahaayeen Jilib hoose oo ka tirsan Cumar Maxamuudka Majeerteen oo la yiraahdo Reer Hassan Samatar. Labada Reerba xoolahoodu isku meel bay daaqi jireen, isku ceelna way ka cabi jireen oo waxay ahaayeen Reero isla duula oo ceeshoo milix ah. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa dhulkoo Eebe barwaaqo ka muujirey ayaa waxaa labada Reer oo lo’doodii isku jirto soo arooriyey wiil la oran jirey Cali Gaas oo uu Ayax Dhowre adeer u ahaa. Lo’ biyo aragtay lama celin karee, iyadoo qamaam ah ayay marba wiilkii yaraa dhinac u dhaaftay. Wuxuu ku dhibaatooday celcelinteedii markaasuu markii danbe ul ku halgaaday. Waxay ushii ku dhacday oo ay lug baabahda ka dhigtay sac uu lahaa Yusuf Seed oo ahaa Reer Hassan Samatar. Reer Dagaal ayaa sacii qashay maadaama uu tabcaamay oo aan la kabi Karin.
Yusuf Seed wuxuu qaan u sheegtay Reer Dagaal kuna dacwooday inay usoo magdhabaan saciisii uu wiiku ka jabiyey reer Dagaalna ay qasheen. Reerihii uu ka dhashay Yusuf seed ee ahaa Reer Samatar Khalaf ayaa u soo jeediyey Yusuf Seed in uu iska samro maamaada waxa dhibkaa geystay ay yihiin Reer Dagaal gaar ahaan Reer Mohamed Dhowre oo ay Bahwadaag yihiin, ha yeeshee Yusuf waa samri waayey. Ayax ayaa Arrintii la yaabay wuxuuna goostay inuu sacii bixiyo laakiin Niman Reer Cigaal ah oo ka mid ah Reer Samatar Khalaf-ka ayay arrintii la xumaatay markaasey 10 adhi ah siiyeen Yusuf una sheegeen inuusan wax danbe u qabsan una raadsan Reer Dagaal.
Maalmo ka dib ayaa waxaa Magaalada Gaalkacayo safar u aaday wiilkii uu Ayax adeerka u ahaa ee Cali Gaas waxaana arkay Yusuf Seed oo ahaa ninkii saca lahaa. Wuxuu dacweeyey wiilkii una sheegay Odayaasha in wiilkan laga siiyo saciisii uu ka jebiyey. Wiilkii yaraa ayaa u sheegay Odayaashii in Yusuf Seed la siiyey 10 ari ah oo uusan ku lahayn wax mag ah. Yusuf Seed wuu inkiray arrintii, waxaana lagu go’aamiyey inuu Cali Gaas dhaarto. Dhaartii ka dib ayaa Yusuf Seed waxaa loo xukumay 10 adhi ah oo kale oo laga rabo inay bixiyaan Reer Dagaal. Ayax ayaa arrintii maqlay oo aad uga xumaaday.
Muddo yar ka dib markii ay dhacday dhacdadaas hore ayaa waxaa ay 2 dumar ahi oo uu midi qabo Mohamed Xaaji Cali Barre midna uu qabo Carre caws gurasho u doonteen banaanka ka baxsan deegaanka. Labadii dumar ahaa ayaa waxay soo heleen Rati buubaal ah oo baadi ah oo duurkaas iska wareegaaya oo baxsad ahaa. Waagaas oo ahayd waagii Gumeystuhu uu dhulka kala boobayey ee soohdimaha la jeexayey ayaa waxaa jirey xeer ahaa in Xoolihii reeraha kale gala aan dib loo celin oo xoolahaasi baadi ma ahayn. Labadii gabdhood ayaa awrkii soo kaxeeyey waxayna kusoo beegmeen gurigii Ayax Dhowre oo markaa ugu kooneeyey guryaha. Waxay gurigii ka cabeen caano iyo biyo maadaama ay soo daaleen awrkiina xeradii Ayax bay uga tageen.
Ayax awrkii wuu ku dhaqmay oo wax badan buu raranayey. Waayo danbe ka dib ayaa wuxuu Mohamuud maqlay Reerkii uu ka dhashay ee Reer Hassan Samatar ahaa oo ku sheekeysanaya awrka. Mohammuud markiiba waa lagu kacay oo wuxuu wiil uu dhalay u diray Ayax si uu awrka uga soo ka xeeyo. Ayax ayaa markii uu dhegeystay wiilkii ugu jawaabay in ay aabihii ka wada xaajoon doonaan. Wiil Ayax dhalay oo wada hadalka awrka maqlayey ayaa ratigii la baxsaday oo soo iibsaday. Mohamuud oo xanaaqsan soona maqlay in awrkii la iibsaday ayaa soo istaagay gurigii Ayax una sheegay inuu awrkii soo celiyo. Ayax aad buu uga xanaaqay gardaradaas qaawan wuxuuna Mohamuud u sheegay inuu wax xoog looga qaato ama gar looga helo mooyee uusan si kale ku bixinayn awrka. Odayaashii Reerka ayaa Mohamuud dejiyey laakiin Mohamuud cid qabata waa la waayey. Buuq iyo ilaaq badan ka dib ayaa waxaa lagu go’aamiyey in la dhaarto oo Gaalkacayo la aado loona tago Qaaligii caanka ahaa ee Qaalli Uusle.
Wuxuuna Mohamuud Qaaligii u sheegay in rati ay naagtiisu lahayd isaguna uu wakiil uga ahaa uu Ayax wiilkiisu iibsaday, haatana uu doonayo ratigiisii. Ayax arrinkii waa mari weydey, wuuna diiday in waxa uu Mohamuud sheegayaa ay run tahay. Qaaligii ayaa ku amray in Ayax uu dhaarto, sidiibuuna Ayax ku dhaartay. Markii arrinkii dhamaaday oo la soo kala dareeyay ayaa wuxuu Ayax Dhowre go’aan ku gaaray inuusan dib danbe Deegaan, Quud iyo Qaaraan uusan ula noqon Reer Hassan Samatar. Wuxuuna go’aansaday inuu ka guuro oo uu Reerihiisa meel kale oo ka cadaalad iyo dadnimo wanaagsan uu raadsado. Ayax intuusan guurin ayuu tiriyey gabaygan caanka ah ee uu ku cabirayo sababta ku keliftay tegitaanka iyo sida uusan u qaadaneynin quudhsi iyo in lagu xad gudbo.
Abwaan Ayax Dhowre wuxuu yidhi:
Indhowaydba waataanan qirin qaaradii gabaye
Waa ka qatanaa meerkan iyo qabadkii dayreede.
Marka addinka qaarkiin gam'aa laygu soo qubaye
Sida Qawdhan iyo Gooni baan uga qiseeyaaye
Qammaam iyo sidii Weerar baan ugu qurxeeyaaye
Qaraabooy i maqal caawa waan soo qadimayaaye
Qubi waa qormada Reer Xasan ah qawl aan maqashiiyey
Qodob kalena waa duniyadii Qab aan ka faaleeyey
Qubi waa qormada Reer Hasana qawl aan maqashiiyey
Nimanyohow qumaati iyo qalooc kala qiyaas roone
Waxba lama qarshee hadal rag waa la isu qeexaaye
Fardo kala quluub bay nin rag ah qar uga tuuraane
Qoomaari orodkay sidii qumanyo roortaaye
Quluubtii dad oo kala go'daa waysu quruntaaye
Dadse heedhe way qoonsan jiray tan iyo qaabiile
Qooraha waxaa looga simay waysku wada qayre
Qawaaniinku waa inuu nin raggi ahi kula quwoodaaye
Rabbi labaduu kala qaadayaa qurux ma yeeshaane
Waxse qoonsimaadkeen ka dhacay qaadistii sace
Qarankeen waxuu jabay markii qaali lays badaye
Naftaa laga qalbaday ruux yamiin qoorta loo suraye!
Waa kaa qamuunyada debnaha qooni kaga taal-e
Maxuu qumiyey Maxamuud hadduu qoomamays yahaye
Haddaanse Yuusuf Dhuux i qasbi karin ina qisaasaynin
Oo aan geel la Qaadiyo idiin la iga qaadaynin
Haddaan aniga qool iyo hogaan la igu qabanaynin
Qoloyari ninkii iga damcaa wow quluub xumo-e
Qaalmo iyo geel aanad qabin adigu ii qaabil
Dabadeedna ii kala qorshee waa qiso adduune
Hadaanse talo rag wada qaybsanoo mid iska qoondaysto
Oo qaydka wiil yari dhufsado lagu qasaarowye
Qoonkii Wadaadkaba beryaa Eebe qoonsadaye
Afarta qablood iyo mar bay dunida qaateene
Kuman qoora goo iyo lug bay col u qarqaareene
Rag towxiidka qiraaya bay ka qarjaf-siiyeene
Qorax saacad joogtiyo barqaa qaamadkood galaye
Cirkaa lagaga soo qayey rasaas gaal ku soo qubaye
Dabadeedna qoys lagama arag toban qof mooyaane,
Majeerteen qaraabiyo tol iyo qaraqareyn waaye
Cali-Geri quwiyo xooliyo iyo waayey quruxdiiye
Qaashkii ku dhacay Aadan buu qaaxadii jaraye
Qabaalkii furee bay lahayd waa yar qawlalaye
Qurrux iyo waxii Cali ka dhacay qabax dharaareede
Salaasiin qur-go'ay lagama simin qayd maraykanahe,
Qarka Ina- Baluun baa lafaha qalax la moodaaye
Waxa Ceel Cadaadi uga jaray qaalin dabadeede
Qab-qab dhaafey bay labo qabiil qaran ku weydaaye
Qaabiilba haabiil markuu qoonsaduu dilaye
Qooqii Suryare loo dilaa qoodha goys dhigaye
Qalbi malahid sheydaan hadduu qaalib kaa yahaye
Waa qowrar low kaaga jabay hadalka qaarkiise
Qardoofo iyo nimaan qaadan bay qaci ka joogtaaye
Qayaad iyo colaad Bah-Hararsame mar isu qoonteene
Gabdhahiina nimankii qabaad kala qatawdeene
Waxaa qiraala inaad uumiyaha kala xorowdeene
Qabkaad Mudug la joogtaan rag waysku qaldamaysaane
Quruun buu awoowgiin lahaa qoon u raaciyahe
Qolqolkiina nimankii fadhiyey qoysna laga waaye
Qaan sheegad buu kaaga tegay qoonkii Reer Amar-e
Gumasoor shalaa laga qur-jaray qalanjahoodiiye
Qardhacna lagama siin kolay ku tahay qaalin moordiyahe
Waxa Wadal-Moggana kaaga qumay waa ku qoonsadaye
Qabkii Ina-Xaliimoo kalaad iga qodaysaane
Ninkii qayrkii loo xiirayoo qoystay baan ahaye
Haddaan qaranka Reer-Diini tagiyo qolo kale u meero
Qallax iyo haddaan Ari-cad dego qaali baan noqone
Xaajada qumaatiga ayaa la igu qaataaye
Mar haddii qalooc hadalku galo waa qaraarahaye
Kolka awrka maan soo qabsado quusashaan ahaye
Dadkoose kula qasaariyo cidoo kula qaraamaada
Qaalmahatan geela ah iyo dharkoo qaadashiyo hooya
Qaydhiga qardhaasaha leh oo dabin la soo qaato
Diraacdiyo aroortii barnida lagu qaxweeynaayo
Feegaare malab jooga iyo herein lebenkeeda
Qunba subaga baabuur iyo qadow la heenseeyey
Waayeelka taladuu qatalay qodobka loo aaso
Qaatooyda dirireed hadday qaylo kore yeedho
Dhalinyaro qamaam waalan oo qalabka boobaysa
Waxaan adiga kugu quudin jiray qolo kalaan siine
Qalanjaha maroodiga ninkii waayo lagu qaybshay
Oo toban haruub oo qar jaran Eebe kaga quudshay
Tolankiyo qamuunyada ninkii labadaba u quuray
Oo qaar dambeedkiyo candhada feerka kaga qaaday
Oo caanahuu qubay ilmadu qoysay baad noqone
Qabiltiyo nikaax naagahaa qaata meherkiiye
Qabaanimo ninkii iga damciyo ii qasaal marada
Qadertaa Illaah iguma qaban qoodhay iyo xeradaye
Waaryaan aniga xaajo aan i qaban la igu soo qaadin!.
Walleese niman qabaayiil ahaan qoonsi kala waayin
Wallee geel nin laga qaaday baan orod qashlayn waayin
Wallee qodaxi nimay saydhay baan qoombin laga waayin
Wallee nimuu Illaah quudiyaan cidi ka qaadaynin
Wallee nimuu Ilaahay qadshaan qolo wax siinaynin
Wallee naag qab weyn iyo rag baan qiro heshiinaynin
Wallee qoys basari leedahaan waana qurux yeelan
Wallee milicdu nimay qabatay baan dhididku qoyn waayin
Wallee nimaan quraan dhiganin baan qaalli noqon waayin
Wallee qaaxo nimay hayso baan soo qufaci waayin
Wallee reer qorfiyo hawd degaan oonku qaban waayin
Wallee naag qabow kaa heshaan qabasho kaa deynin
Wallee tuug la daba qayliyaan qoobka rogi waayin
Nin qasaare galay baan Wallee qoomamo ilaawin
Wallee nimaan is qabanoow wanaag igama sii qaadid
Waxaa tirirey Abwaan/Halyeey iyo Geesigii Ayax Dhowre Dagaal
Waxaa soo gudbiyey C/Rahman Eelaay eediran@yahoo.com
QORAALADII HORE EE EELAY...
Faafin: SomaliTalk.com | April 4, 2005